🥇 ▷ Google Pixel 3: bilowga sidoo kale saldhig u ah ku dallacsiinta ku-dallaca bilaa-waayirka ah oo leh wax kabadan hal qalab? ✅
Google Pixel 3: bilowga sidoo kale saldhig u ah ku dallacsiinta ku-dallaca bilaa-waayirka ah oo leh wax kabadan hal qalab?
Toddobaadyadii la soo dhaafay, mid ka mid ah xantahan ayaa bilaabay inuu ku wareego mustaqbalka Google Pixel 3 oo awood u leh in lagu helo iyada oo loo dhan yahay: dib u soo celinta weyn ee xukun la’aanta wireless, si qarsoodi ah maqnaanshaha jiilalka ugu horreeya ee taxanaha. Ku xukumaya tixraacyada cusub ee laga helay barnaamijka Google inkasta oo ay tahay, waxay umuuqataa taasi Big G ma doonayo inaad naftaada xaddido kaliya shaqada guriga.
Xaqiiqdii, tixraacyada ayaa ka dhex muuqday xargaha koodhka ee barnaamijka apk Pixel taagan, oo ah ku dhawaad ​​magaca aan sinnayn ee loo yaqaan ‘Pixel brand charging base’, oo awood u leh inuu sii wado taagan aaladda inta lagu dallacayo. Illaa iyo hadda wax gaar ah oo hal-abuurnimo ah, miyaanay ahayn calaamadaha kale ee la soo bandhigay.
AKHRISO: Admire Pixel 3 iyo Pixel 3 XL sharaftooda oo dhan
Waxay umuuqataa dhab ahaantii in Pixel Standkani ahaan doono lagu daro nidaamka deegaanka kaaliyaha deegaanka ee Google waxaana adeegsan kara tilmaamaya a siyaada lagu kalsoonaan karo. Tani waxay ku lug yeelan doontaa suurtagalnimada si ay ula falgalaan cod ahaan iyada oo loo marayo qalabka dallaca, sidoo kale oo leh shaashad dansan, ka gudubka xayiraadaha amniga. Fikrad runtii aad u xiiso badan, oo u oggolaaneysa Pixel 3 inuu sii wado inuu noqdo mid wax soo saar leh oo faa’iido u leh adeegsadaha xitaa inta lagu jiro dallacaadda.
Caawiyahaagu wuxuu adeegsan karaa macluumaadkaaga gaarka ah si uu talo u soo jeediyo, uga jawaabo su’aalaha, oo uu kuu qaado ficilo adiga kuu gaar ah markii taleefankaagu xiran yahay iyo Pixel Stand-kaaga
Hel caawimaad shaqsiyeed marka taleefankaagu ku yaalyo Pixel Stand-kaaga